Okudilivwayo : Malawi MW
Imikhiqizo Eyizigidi Ezingu-100+
Ukulethwa Okusheshisiwe Kuyatholakala
Isilinganiso sika-4.2 Ku-Trustpilot
UKUTHENGA KWE-INTERNATIONAL ONLINE KWENZE KULULA LAPHA
Izinto Zikagesi & Imishini Yasendlini
amabhrendi athrendayo njengamanje
izitolo zemikhiqizo yamazwe ngamazwe namaqoqo
isitolo sezinsimbi zomculo
Isitolo semikhiqizo yehhovisi
isitolo sokunakekelwa kobuhle
izingubo ezikhululekile zabesifazane
ihhashi & yamahhashi
izinto ezibalulekile zesikole
Izihlungi Zamanzi Ekamu
Amanzi Aphephile Nahlanzekile Ohambeni!
IGovee LED Floor Lamp, 2000 Lumen RGBWW Smart Floor Lamp Isebenza ne-Alexa, iGoogle Assistant, iMigidi engu-16 yemibala kanye nama-32 Scene Mode, Music Sync Modern Floor Lamp for Bedroom, Living Room
Leitner LH280 phen Wireless Office Headset ngeMicrophone andic & Computer & Ucingo Headset phenone Headset Compatible nge-99% yeDesk Phones phenessess Headset ye-USB ne-RJ9 Headset ye-Landline Phone
Imikhiqizo Yokulahlekelwa Izinwele
Izandiso Zezinwele & Amawigi
I-Bialetti 00AGR395 Tutto Crema Milk Frother, (6 Cup), 23 oz (1 L), Emnyama
I-Ice Cream Maker, i-Quart Outtaile Frozen Yogurt, iSorbet, ne-Ice Cream Machine, i-Auto Shut-off Timer Function BPA-free Frozen Dessert Machine
I-GoCube I-Cube ye-Electronic Electronic Bluetooth Cube: Uhlelo lokusebenza lwe-Award-Winning Olunikwe amandla i-STEM Puzzle ye-All Ages. Uhlelo lokusebenza lwamahhala
I- 2 -in- 1 Iselula Ithoni Imile nge-Bluetooth Speaker Photable Phound Gadget Desktop Holder High-Definition Stereo Bluetooth Speaker Ilungele Izingcingo Zamaselula, Amatafula, Ukubuthana Komndeni, Ukuhamba Kwangaphandle
Igalofu Practice Net, I-10x7ft Golf Hitting Training Aids Nets ngeTarget neCarry Bag for Backyard Driving Chipping - 1 Golf Mat - 5 Igalofu yamaTes- Men Indoor Outdoor Sports Game
ISAVOURIO Pink Mini Skincare Fridge - 10 Liter - Compact Portable Beauty Fridge for Bedroom, Office, Dorm, Car - Cooler and Warmer Great for Skincare & Cosmetics
Impilo & Ikhaya
Izinsiza Zokulala Nezokuhona
Umsindo we-Brave Eau de Toilette Spray Cologne we-Men
I-Officate Deluxe 2 -Hole Punch ngeChip Drayer, i-50 Sheet Capacity, iSiliva / Navy (90101)
Amabhodlela Amanzi we-SPECIAL MADE Collapsible Amanzi angashintshiwe I-Leakproof Valve Reuseable BPA Free Silicone Foldable Travel Water Bottle for Gym Camping Hiking Travel Sports Lightweight Drable 20oz Dark Green Green
I-AW Tabletop Blow Dryer Hair Iron Holder Salon Appliance Yima nge 3 Izitolo zeStylist Hot Tool Straightener
Ama-Wags Weekender Amabha weWomender Warge Canvas Overnight Bag Travel Duffel Bags Carry on Beer Weekend Bag nge Shoe Compartment for Travel Night Flight Daily Use (Light Brown)
Isikhulumi Sekhaya 500: Isikhulumi se-Smart Bluetooth nge-Alexa Voice Control Sakhelwe ngaphakathi, iBlack
I-Pphonemo-M110 I-Label Maker - I-Thermal Label Printer Maker evelele Yezingubo, i-Jewelry, i-Retail, i-Barcode ne-More, Ihambisana ne-Android & iOS System, i-Orange
Ideski leLaptop for Bed, SAIJI Lap Desks Bed Trays for Eating Writing, Adaptable Computer Laptop Stand, Foldable Lap Table in Sofa and Couch (23,6 x 13,Black)
I-Tinsow Artificial Easter Flower, 3 I-Pcs Easter Spray ene-Easter Egg kanye ne-Colourful Berries Decature Spril Floral Statural Speckled Easter East Eack Brches for Easter, Floral Arrangement Center
TESLYAR Wood Rotating Swivel Ucingo Dlocking Station Ash Key Holder Stop Watch Organizer Men Hen Henband Wife Annivers Ubaba Birthday Nighttand Purse Father Graduation Male (Brown)
Izibani ze-LED Strip
Khanyisa Imicimbi Yakho Yamaholide Ngemibala Yephathi!
Ama-blender & ...
Ama-Hard Drives ...
I-Waterdrop TSA 3 -Isigaba Ngaphansi Kwesihlungi Samanzi Esipinki, Direct Xhuma Ekhaya Faucet, NSF / ANS 42 Isifungo Esiqinisekisiwe, I-USA Tech
I-ArmoGear Laser Tag Shooting Game 2 Pack Kids Laser Tag Balloon Battle Indoor and Outdoor Targeting Toy Tarching Toy phenal Elect Electronic Gift for Boys Ages 8 +
Bhalisa uthole u-Yephula kufike 15% entweni yokuqala oyithengayo.
Sicela ufake ikheli le-imeyli elisebenzayo.
Khetha Ubulili Owesilisa Abesifazane Okunye
Amathoyizi & Ama-game
I-Ultimate International Shopping Experience Platform yamazwe ngamazwe e-Malawi
I-Ubuy ikunikeza ithuba lokukhetha imikhiqizo enegama eliphezulu ehlezi endaweni enethezekile yamakhaya akho bese uchofoza nje izidingo zakho ukuze ilethwe emnyango wakho. Ukusesha kwakho kwezinhlobonhlobo zakamuva ezithrendayo zemikhiqizo ehlukile kuphelela lapha. Izinhlobonhlobo zemikhiqizo yamazwe ngamazwe evela kumikhiqizo yomhlaba wonke ziyatholakala ezandleni zakho. Sikunikeza ulwazi lokuthenga ku-inthanethi olusezingeni lomhlaba, kanye nesevisi ephakeme, ukuze uvumelane nazo zonke izidingo zakho ezithile. Imikhiqizo yethu inenani eligculisayo futhi ayitholakali kalula kwenye indawo. Amasistimu ethu asezingeni eliphezulu asekelwe kubuchwepheshe, ahlanganiswe nendlela yomuntu, aqinisekisa ukuthi unolwazi olumangalisayo nolujabulisayo lokuthenga ku-inthanethi nathi. Ukugcizelela kwethu enjabulweni yamakhasimende kushayela wonke umsebenzi esiwenzayo ukuze sikunikeze isipiliyoni sokuthenga sakamuva, esingenazinkinga futhi esimnandi. Izigaba zethu ezihlukene zemikhiqizo zihlanganisa imfashini nobucwebe, omakhalekhukhwini namathebulethi, amageyimu evidiyo nokuzijabulisa, amathoyizi nemidlalo, ukunakekelwa kwezingane, Izimpahla Zasekhaya, Amathuluzi Esandla Asengadini, ogesi namakhompuyutha, ukunakekelwa kwezempilo nezithako, ezemidlalo nokuqina, izinto zasehhovisi nezinto zesikole, ubuhle namakha, ukuhamba nangaphandle kanye izesekeli zezimoto . Sinikeza cishe yonke inhlobo yomkhiqizo efiswa inhliziyo yakho. Vele Uqhubeke Futhi Uhlole umhlaba omangalisayo wokuthenga ku-inthanethi nge-Ubuy !
Izigaba Zomkhiqizo Othengiswa Kakhulu ku-Ubuy Malawi
Izigaba zemikhiqizo edumile ku-Ubuy zihlanganisa izinto zikagesi, omakhalekhukhwini kanye nezinsiza, ikhishi nendawo yokudlela, izincwadi nemikhiqizo yasehhovisi. Sinikeza izigaba eziningi zomkhiqizo odumile ukuze zivumelane nezidingo zakho ezithile kanye nezifiso. Manje usungakwazi ukusesha uhlu lwemikhiqizo esigabeni esidumile futhi uthenge ku-inthanethi ngendlela esheshayo nephumelelayo ukuze wonge isikhathi sakho esiyigugu. I-Ubuy ingesinye sezindawo ezinhle kakhulu zokuthenga eziku-inthanethi emakethe.
Sinikeza okunikezwayo kokuthenga okuku-inthanethi okungcono kakhulu kwazo zonke izinto zika-elekthronikhi njenge-TV nevidiyo, umsindo wasekhaya nomculo, Amakhamera namaDrones, ubuchwepheshe obugqokekayo kanye nezinsiza zikagesi ukuze zihambisane nezidingo zakho futhi zifanele ibhajethi yakho. Iqoqo lethu lamaselula, amakhompyutha aphathekayo, ama-TV njll anikezwa ngezindlela eziningi ongakhetha kuzo kanye nezaphulelo zakamuva ezinikezwayo kanye nezaphulelo ezinikezwa unyaka wonke. Imikhiqizo namasevisi ekhwalithi ephezulu kukwenza ukwazi ukuthenga ku-inthanethi okujabulisayo.
I-Ubuy ingesinye sezitolo ezingcono kakhulu eziku-inthanethi esinikezela ngeqoqo Lezikhwama Zezandla, Izingubo, Izimonyo, Ubucwebe, Amajini, Izikibha Nezicathulo ezitholakala ngamasayizi ahlukahlukene, umumo, imibala kanye nemiklamo ukunikeza injabulo enkulu kumakhasimende. Ukunakekelwa okukhethekile kuthathwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi imikhiqizo ehamba phambili kuphela efinyelela kuwe. Manje bukeka umuhle futhi umuhle ngohlu lwethu lwemikhiqizo yemfashini edumile etholakala ngokuchofoza inkinobho.
Uhlu lwethu lwamakha angavamile avela emikhakheni ehlukene yamakha atholakala ngezinhlobonhlobo zamakha ukuze ajabulise izinzwa zakho futhi akushiye uzizwa umangalisa. Zithuthukisa isimo sakho sengqondo futhi zikwenze uzizwe uqiniseka ngokwengeziwe futhi ungcono ngawe. Manje zama amakha ethu ukuze utotose izinzwa zakho futhi ubukise ngamakha akho nomaphi lapho uya khona futhi wenze isitatimende esinesibindi!!
Izingcingo Eziphathwayo & Okuhambisana Naso
Thola okunikezwayo kwakamuva okuku-inthanethi namadili ahamba phambili kumaselula nezisetshenziswa zamaselula kwa-Ubuy. Sihlinzeka ngobubanzi obuguqukayo bamafoni aphathekayo anezincazelo ezehlukene ukuze zivumelane nokuthandayo nokuncamelayo komuntu ngamunye. Izinhlobo eziningi zomakhalekhukhwini ziyatholakala ukuze zikunikeze umuzwa omangalisayo ngamanani ancintisanayo. Thola umakhalekhukhwini wakho oyiphupho lapha futhi ugcwalise isifiso sakho sokuhlala uxhumekile ngesitayela.
Ukukhetha kwethu amakhompyutha aphathekayo amageyimu kunikeza ukuzijabulisa okunganqamuki futhi kujabulise kuwo wonke umndeni. Kukusiza ukuthi uxhume, uphumule futhi uhlole amakhono akho okudala. Amaphrosesa wekhwalithi ephezulu namasistimu omsindo kumakhompuyutha aphathekayo anikezela ngomuzwa wokudlala ogxilile kunanini ngaphambili.
Thuthukisa ukubukeka kwakho nobuntu bakho ngohlu lwethu olungavamile lwemikhiqizo yobuhle enegama elikunikeza ukunethezeka nokwaneliseka okukhulu. Imikhiqizo yethu ihlolwa ngokwezinga elikhulu ukuze kuqinisekiswe ukuthi iyahambisana nesikhumba futhi inikeza ubuhle obuhlala isikhathi eside. Ngakho-ke bukeka umuhle futhi uzizwe umangalisa ngokukhetha okulungile.
Imikhiqizo Yokuthuthukisa Ikhaya
Yisikhathi sokuthuthukisa ikhaya lakho futhi ulenze libengcono kungaphambili. Ngakho iqoqo lethu lemikhiqizo yokuthuthukisa ikhaya likusiza ukuthi wenze ikhaya lakho libe nempilo futhi libe lihle. Sinemibala eminingi, imiklamo, indlela yokwenza kanye nokwakheka okufanelana nokuhlobisa kwakho futhi sengeze ubukhazikhazi ekhaya lakho.
Zonke izinhlobo zemikhiqizo yasehhovisi ziyatholakala eqoqweni lethu. Akumele ubheke kwenye indawo ukuze uthole noma yiziphi izimpahla zakho zasehhovisi. Uzothola imikhiqizo yekhwalithi ephezulu enenani elifanele ukuze ihambisane nezidingo zakho ezithile khona lapha e-Ubuy.
Esinye sezitolo ezingcono kakhulu ze-inthanethi e-Malawi
I-Ubuy ingesinye sezitolo ezingcono kakhulu ze-inthanethi e-Malawi. Sihlinzeka ngemikhiqizo ehlukahlukene yamazwe ngamazwe emhlabeni jikelele. Ingosi yethu ilungele amakhasimende kakhulu futhi izinsiza ziyashesha futhi ziyanelisa. Ukuthenga kumnandi futhi kuyajabulisa e-Ubuy. Sisebenzelana nemikhiqizo yekhwalithi ephezulu ehlangabezana nezindinganiso zethu eziphakeme ezihambisana nesevisi emangalisayo ukuze siqinisekise injabulo yamakhasimende.
Thola Ukunikezwa Kokuthenga Kwakamuva Ku-inthanethi Nezaphulelo E-Ubuy
I-Ubuy inikeza okunikezwayo kokuthenga okuku-inthanethi okungcono kakhulu kanye nezaphulelo ngezikhathi ezithile unyaka wonke. Yonke imikhosi nezinsuku ezikhethekile yisikhathi esifanele sezaphulelo ezikhethekile nezaphulelo. Amakhasimende angakhetha kumadili anhlobonhlobo nokunikezwayo okutholakala kuphothali. Ngakho-ke qhubeka ubambe ithuba lakho elihle lokonga imali futhi uthole imikhiqizo obuhlala uyifuna.
Algeria Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Cape Verde Central African Republic Chad Comoros Cote dIvoire Djibouti Equatorial Guinea Ethiopia Gabon Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Mali Mauritania Mauritius Mozambique Namibia Niger Nigeria Republic of the Congo Rwanda Réunion Saint Helena Senegal Seychelles Sierra Leone South Africa São Tomé and Príncipe Tanzania The Gambia Togo Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe Buka Wonke Amazwe